DOORKA XAQ-U-DIRIRKA (Hanqaraarac lug uma dhutiyo) Qaddiyadda Soomaaliya Wey Ka Weyn Tahay Laba Sheekh
Waxaa mahad leh Allaah sareeye guusha siiyay xaq-u-dirirka, kadibna waxaa mahad mudan xaq-u-dirirka dhiigooda u huray difaaca, diinta, dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
Wixii ka dambeeyay ridistii maamulkii milatari ee Jen: Maxamed Siyaad Barre madaxda ka ahaa,waxaa dalka soomaaliya galay fowdo iyo isku dhex yaac dhan walba ah. Waxaana amni darradii is-cunkii walaalaha colloobay ay horseedday in dadku kumannaan iyagoo ah ka cararaan dalkoodii hooyo,iyagoo aan si dhab ah u ogayn halka ay ku jeedaan,waxa ay mudan karaan iyo muddada ay ka maqnaanayaan dalkooda hooyo ee colaaddu ka hurtay,balse ujeedkooda ugu wayni yahay in ay lafahooda kala badbaadaan dagaallada iyo diifta ka dhalatay.
Labadii sano ee u dambaysay soomaaliya waxaa ka dhacay dhibaatooyin xooggan. Dalkii waxaa ku soo duulay Ethiopia oo xoog ku qabsatay, imaatinka Ethiopia iyo gumaadka ay ka gaysatay Somalia ayaana sababay geerida kumanaan soomaali ah iyo barakaca in ka badan Hal milyan iyo bar geedaha hoos jiifa baadiyaha u dhexeeya Mogadishu iyo Afgooye iyo meelo kale oo dalka ka mid ah.dadkasoo aan cidna u maqan aysan jirin.
Hadaba Waxaa dhowrkii todobaad ee lasoo dhaafay muuqday khilaaf soo kala dhex galay isbaheysiga la baxay 'Dib U Xoreynta Soomaaliya' ee sanadkii lasoo dhaafay lagu aasaasay magaalada Asmara ee dalka Ereteriya.
Xubnaha ku bahoobay isbaheysigan oo tiradoodu gaareyso 191 qof ayaa ka kooban koox qurbo-joog ah, koox ka tirsanaan jirtay baarlamaanka Mbagathi, koox la magac baxday bulsho rayid iyo koox wadaaddo ah.
Inkastoo hal qeyb oo qura ay isbaheysiga kaga qeyb gashay magaca 'qurbo-joog' misana waxaa muuqata in dhamaan 191-da qof ee uu isbaheysigu ka kooban yahay, marka laga reebo shakhsiyaad faro ku tiris ah oo Soomaaliya ku sugan ay haatan yihiin qurbo-joog ku nool wadamada Ereteriya, Jabuuti, Qatar, Imaaraadka Carabta, iyo wadamada galbeedka.
Isbaheysiga oo haatan u muuqda mid u kala jabay laba qeybood: (1) Isbaheysiga Asmara, iyo (2) Isbaheysiga Jabuuti ayaan maalmihii lasoo dhaafay waxba isula harin, iyagoo hadallo aan munaasib aheyn isu mariyay saxaafadda.
Inkastoo uu Isbaheysigu leeyahay laba guddoomiye, guddoomiye guddiga fulinta iyo guddoomiye gole dhexe, misana awoodda rasmiga ah ee isbaheysiga waxey aheyd mid ay lahaayeen laba Sheekh, Sheekh Shariif iyo Sheekh Aweys.
SHEEKH SHARIIF SHEEKH AXMED
Wuxuu sumcad iyo magac yeeshay xiligii ay Maxkamadaha ka talinayeen magaalada Muqdisho waana shakhsi aftahan ah. Waa nin dulqaad badan diin iyo daacadnimana lagu sheegay.
Waxaa Sheekha lagu eedeeyay go'aanka uu ku qaatay in wada hadal lala galo Kooxda Mbagathi iyo heshiisyo qarsoodi ah oo la sheegay in uu la galay dalal ay kamid yihiin Mareykanka, Yeman, Sacuudiga iyo Masar.
Ka faalloon meyno go'aanka uu Sheekhu ku gaaray in uu wada hadal la galo Kooxda Mbagathi waayo taariikhda ayaa mustaqbalka xusi doonta sax iyo khalad miduu go'aankaasi ahaa, balse waxaan ka faallooneynaa doorkiisa hoggaan.
Maadaama Sheekh Shariif yahay guddoomiyaha guddiga fulinta isla markaana ah guddoomiyaha isbaheysiga, isaga ayey mas'uuliyaddiisa aheyd in uu isku hayo isuna soo dhoweeyo xubnaha isbaheysiga.
Xubnaha ugu dhow dhow Sheekha ee isbaheysiga ku jira waxaa kamid ah Sheekh Xassan Daahir Aweys, Sheekh Cumar Iimaan iyo Jeneraal Jaamac Maxamed Qaalib. Haddii uu Sheekh Shariif ku guul dareystay in uu xubnahan aadka ugu dhow dhow ku qanciyo go'aanka uu gaaray, sidee buu Soomaali ugu qancin karaa go'aanka xasaasiga ah ee uu qaatay?.
Haddii Sheekh Shariif go'aanka uu qaatay uu sababay burburka golahii uu madaxda u ahaa isla markaana uu ka madax adeygay la tashi uu la yeesho xubnaha golaha uu madaxda u yahay, su'aasha la is weydiin karo ayaa waxey tahay yuu qancinayaa Sheekhu, kaba sii darane haddii Sheekhu kala diray golahii uu madaxda u ahaa sidee buu isugu keeni karaa Soomaali?.
Waxaan aaminsannahay in Sheekhu yahay shakhsi daacad ah, balse siyaasad ahaan, ma qabno in uu yahay nin karti, xirfad iyo aqoon u leh in uu hoggaamiyo Ummad Soomaaliyeed.
SHEEKH XASSAN DAAHIR AWEYS
Sheekh Aweys waa shakhsi magac ku dhex leh Ummadda Soomaaliyeed, waa halgame door weyn kasoo qaatay ka shaqeynta wanaagga iyo la dagaallanka xumaha.
Sheekh Xassan waxaa lagu xusuustaa doorkii uu ka qaatay la dagaalanka xumaha laga soo bilaabo 1992-dii, markaas oo uu la dagaalamay dagaal-ooge Cabdullaahi Yuusuf.
Sheekh Xassan wuxuu saameyn weyn lahaa markii uu ku sugnaa gudaha dalka, balse haatan oo uu qurbo-joog yahay saameyntiisu ma gaarsiisna halkii uu jeclaan lahaa.
Maadaama uu Sheekhu yahay nin door weyn ku leh isbaheysiga waxaa habbooneyd in khilaafka ka dhex jira gudaha isbaheysiga uu kala xaajoodo Sheekh Shariif ee aanu idaacadaha kala dagaalamin wadaaygiis.
Maadaama Sheekh Xassan aanu jago sare ka hayn isbaheysiga lama saari karo eedeyn lamid ah midda Sheekh Shariif.
DOORKA XAQ-U-DIRIRKA (Hanqaraarac lug uma dhutiyo)
Sida muuqata lana xaqiijiyay, afartii todobaad ee lasoo dhaafay ayaa ahaa todobaadyadii weerarada ugu badan lagu qaaday ciidamada gumeysiga Itoobiya. Todobaadyadan weerarada ugu tirada badan leh loo geystay Itoobiyaanka waxey ahaayeen todobaadyada ay hoggaanka isbaheysiga Asmara isku mashquulsanaayeen oo ay idaacadaha iska weerarayeen.
Arrinkan ayaa kuu muujinaya in 'Hanqaraarac aanu hal lug u dhutin' isla markaana halganka Ummadda Soomaaliyeed kaga soo horjeeddo cadowga Itoobiya yahay mid ka weyn isbaheysiga Asmara.
Si Kastaba ha ahaatee Isbaheysiga Asmara waa mid Qurbo-joog ah, halganka xaq-u-dirirkana wuxuu ka socdaa gudaha dalka, sidaa daraadeed is qabqabsiga iyo kala qeybsanaanta isbaheysiga wax saameyn ah ku yeelan meyso halganka xaq-u-dirirka ah ee lagaga soo horjeedo ciidamada gumeysiga Itoobiya.
Guushu wey dhowdahay Allaah idanki ee dulqaad hala yeesha
Faafin: SomaliTalk.com | June 12, 2008